LONKE LAMAGUMBI AMABINI IMIZUZU emi-2 UKUSUKA KWI-AIRPORT
Ifulethi elihle kwiziko lembali laseSan Maurizio Canavese, kwindawo ezolileyo, entsha kunye neyokuphumla, yalungiswa ngokupheleleyo. Ezikude 2.5 km ukusuka Caselle moya,-20km ukusuka kwiziko eTurin, kunye Porta Nuova Station, 15km ukusuka Reggia di Venaria kunye Juventus bala, ezi iindawo zifikeleleka lula ukusuka kwisikhululo sikaloliwe (eTurin-Ceres) kunye koololiwe abapasa yonke imizuzu engama-30 , iimitha ezingama-50 ngeenyawo ukusuka kwindawo yokuhlala, kunye nentengiso encinci, ikhemesti, imivalo, iindawo zokutyela nokunye okuninzi ...
Igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, kunye nebhedi eyodwa, xa uceliwe, yomntwana, i-wardrobe eyakhelwe ngaphakathi, isifuba sedrowa kunye ne-TV, iKITCHEN enefriji, i-oven microwave, i-toaster, i-BATHROOM enezixhobo ezintsha ze-sanitary, ibhafu eneshawa, kunye nomatshini wokuhlamba.
UKUNGENA ngesipili kunye nehanger yedyasi.
indlu ifumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe, izitshixo zibonelelwa xa zifika.
ISan Maurizio Canavese yidolophu ezolileyo, emdeni wesikhululo seenqwelomoya iCaselle.Sisisiqalo esihle sokutyelela isixeko saseTurin, iiLanzo Valleys kunye nepaki yaseMandria eneReggia di Venaria entle.
Luphawu oluphawulekayo njengoko lukumgama oyi-1.5 km kuphela, kwabo baza kusebenza kwindawo entsha kraca yeevenkile (Caselle Open Mall) evula ngo-2022.
umamkeli uya kufumaneka kuyo nayiphi na imfuno okanye ulwazi.
ngesicelo kunye nenkonzo yomrhumo wokuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya sase caselle, kwibala lemidlalo lasejuventus, okanye kwiindawo ekuya kuchazwa kuzo.